Ka diso hevitra isika raha hilaza fa tsy ahalala ny antsipirihan'ny zava-misy eto amin'ny firenentsika ireo masoivoho samihafa ireo, izy samy izy ihany koa any ambadiky any mbola mifampiresaka sy mifanakalo vaovao.
Manana mpitsikilo na Agent secret izany izy ireo mitady sy mikaroka vaovao, na ara-politika io, na ara-toekarena, na ara-kolotsaina. Idirany avokoa izany ireny fikambanana samihafa ireny, ireo mpanao gazety na tera-tany na vahiny, mety amin'ny alalan'ny fanampiana ara-bola na ara-pitaovana no anaovany izany, na fiaraha-miasa ofisialy toy ny fanampiana fiofanana ara-tafika ohatra, hidirany any anatin'izay zohy faran'ny tery ahafantarany ny momba anao.
Ny Ambassade dia manana immunité, na tsy azo kasihina, eny na ny fiara entiny izay plaque verte aza, tsy azo savaina.
Ny tranony, ny biraon'ny Ambassade dia heverina toa ny tanin'ilay firenena ampiatranoana, ka ny lalàna rehetra ao anatin'ny Ambassade, dia izay lalàna misy ao aminy no mihatra amin'io faritra io, na ny fiaran'ny ambassade. Izay no mahatonga ny sainam-pirenenan'ilay firenena ihany no ajorony eo an-tokotaniny fa tsy misy sainam-pirenena malagasy mijoro eo. Hilazany fa "Ici c'est ...".
Ny olona iray izany na teratany ao aminy na olon-kafa dia afaka mangataka fiarovana ao aminy raha misy mety anenjehan'ilay firenena mpampiantrano ilay olona, azony atao ny miaro an'iny ao raha mifanandrify amin'ny lalàna ao aminy sy ny toe-javatra misy. Ilay firenena mpampiantrano kosa afaka mangataka iny olona arovany iny havoakany tao. Fa dinika hafa indray izay.
Rehefa anangana Masoivoho vaovao izany ny firenena iray dia dinika lavabe izay satria misy ampahan-tany sy fiandrianam-pirenena na souveraineté omen'ilay firenena mampiantrano an'ilay firenena vahiny mangataka honona sy hiasa eo amin'ny Firenena iray. Ny faritry ny ambasady izany dia Firenena kely ao anaty Firenena iray, "Etat dans un autre Etat".
Ny fanendrena lehiben'ny Masoivoho na Ambasadaoro, dia lavabe ihany koa, satria dia olona eken'ny andaniny sy ankilany ny Ambasadaoro tendrena sy ekena hiasa, ary tsy maintsy ny filoham-pirenena no mandray ny taratasy fanendrena azy, satria misolo tena ilay firenena izy, ary misolo tena ilay filoham-pirenena nanendry azy. Ny Ambasadaoro dia mandeha amin'ny fiara misy ny sainam-pireneny, hilazana fa izy no solotenan'ny filoham-pirenena izay misy azy. Raha ilainy aza dia manana zo, savaina lalana amin'ny motard izy.
Azon'ny mpitondra atao ny mampiantso, convocation, fa tsy note verbale na an-taratasy, na antso antaroby an'ilay Ambasadaoro hilazana aminy ny tiana ampitaina amin'ilay firenena iray. Efa dingana lehibe vao tonga amin'izay. Mitovy amin'ny hoe mampiantso ilay filoham-pirenena nanendry azy izay.
Azon'ny firenena mpampiantrano koa ny mampody ireo masoivoho ireo, na ny solotenany, na manakatona mihitsy ny masoivoho. Fa aza adino ny fenitra goavana izay mamaritra ny diplomasia, dia ny fitovian-danja amin'ny zavatra rehetra atao, na ny réciprocité.
Rehefa manao convocation ianao dia mety hanao toy izay koa izy. Rehefa mitaky Visa ny firenena iray dia tokony ho takianao Visa ihany koa ny teratany any aminy rehefa andeha aty aminao. Rehefa ny Filoha no mivahiny any aminy, dia Filoha ihany koa no mandray azy. Ka izay milefitra izany no kely ila, na mety stratejia ihany koa, aroso ny "Pion" iray ho faty mba hamandrihana ny "Fou" ao aminy.
Fa aza adino fa jeu d'échecs io, mamely ianao androany, dia anjarany indray no amely anao rahampitso, dia mifandimby eo, na hiafara amin'ny latabatra boribory, na hifanenjana. Ny zava-dehibe, amin'ny diplomasia, dia amin'ny fotoanan'ny fifampiraharahana no tena midaroka baomba na mamely fantsy ny adve, hampisehoany ny heriny hileferanao mandritra izay dinika an-databatra boribory izay.
Safidy izany eo, fotoana androsoana ny "Reine" ve izao, sa mbola ny "Tour" aloha no mibahana ahazoana fotoana malalaka kokoa andinihina ny atao, ny jeu d'échecs manko ny mampiavaka azy, dia ny fananana sy fampiasana ny fotoana sy lazon'ady izay mety mandeha aman-taonany arakarak'ireo mpilalao sy ny fitsipika nifametrahana, ka amin'ny fotoana ilanao azy no amelezanao azy tampoka.